Madaarka Kuala Lumpur ee Malaysia oo laga sifeeyey suntii lagu dilay Kim Jong-Nam - BBC News Somali
Madaarka Kuala Lumpur ee Malaysia oo laga sifeeyey suntii lagu dilay Kim Jong-Nam
26 Febraayo 2017
Khubarada kiimikada oo ka sifaynaya suntii VX gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Kuala Lumpur
Qayb ka mid ah gegida diyaaradaha ee Kuala Lumpur oo ah halkii lagu dilay ninkii ay walaalaha kala bahda ah ahaayeen hogaamiyaha Woqooyiga Kuuriya, ayaa booliska Malaysia sheegeen in laga sifeeyey suntii neerfaha ee loo adeegsaday dilkaa.
Koox ka tirsan ciidanka nabadgelyada oo gashan dhar jidhkoo dhan wada shaqlay ayaa goobta ka sifaynayey suntaas.
Wasiirka caafimaadka Malaysia ayaa sheegay in baadhitaankii lagu sameeyey maydkii Kim Jong-nam lagu ogaaday in dilkiisa loo adeegsaday sunta disha neerfaha oo keentay "in jidhkiisu mar qudha naafoobo".
Waxaana baadhitaannadaa lagu ogaaday in suntan la adeegsaday tahay mid aad u halis ah oo la yidhaa VX.
Madaarka waxa suntaaa ka sifaynayay kooxo booliska ka tirsan oo ku takhasusay sifaynta walxaha kiimikaad ee deegaanka lagu sii daayo, khubaro ka socota waaxda ka hortagga walxaha halista ah ee dabdemiska iyo sidoo kale khubaro ka socday wakaaladda quwadda korontada nukliyeerka ee dalka.
"Sifayntaa baaxadda leh la fuliyey ka dib, waxaan cadaynaynaa waa marka koobaad e in aan haatan walxo kiimikaad oo halis ah laga helayn qaybta KLIA2 ee madaarka, waa ta labaade in isla qaybtaasi gabi aanteed ba ay tahay meel bad qabta iyo ta saddexaad oo ah in KLIA2 haatan tahay goob aan wax khatar ahi ka jirin oo ay furantahay" ayuu yidhi Abdul Samah Mat oo ah sarkaalkii hogaaminayey baadhitaannadii ay boolisku wadeen.
25 Sebtembar 2020
Booliska Mareykanka ma loo maxkamadeyn karaa toogasho ay geysteen?
Wargeysyada Carbeed maxay ka qoreen go'aanka Falastiin ku diiday gudoomiyenimada Jaamacadda Carabta?
8 qodob oo uu ballan qaaday R'iisul Wasaare Rooble iyo 7-dii qodob ee Kheyre
23 Sebtembar 2020
Shan goob oo aad u dalxiis tegi karto gudaha dhulka Soomaalida
22 Sebtembar 2020
Waddamada ugu awoodda badan dhinaca milatariga Adduunka
Maxay tahay shaqada ninkan Soomaaliga ah ee Joe Biden uu xilka sare u magacaabay?
Afar arrimood ka ogoow Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya
18 Sebtembar 2020
Maxaa kala qabsaday gabadh wariye ah oo aa xijaabnayn iyo hoggaamiye Taliban ah?
Sheekooyinka boqor Afrikaan ah oo "hilibka dadka cuni jiray"
19 Sebtembar 2020
Culimada Carabta ma waxaa loo shaqaaleysiiyay in ay xayeysiiyaan heshiiska Israa'iil?
21 Sebtembar 2020
'Waxaa la igu eedeeyay inaan afduub ku heysto cunugeyga oo caddaan ah'